Ukhuza iSafa uthi ayidlalele kude noMcCarthy uMadl’nyoka woSuthu - Impempe
Ukhuza iSafa uthi ayidlalele kude noMcCarthy uMadl’nyoka woSuthu
May 3, 2021 May 3, 2021 Impempe.com
UGeorge "Madl'inyoka" Dearnaley
Usehlabe ikhwela kwiSafa ukuthi ayike ihlehle, ingamphazamisi uBenni McCarthy kuMaZulu FC uGeorge “Madl’nyoka” Dearnaley owayengumgadli waleli qembu kudala.
Uthi lukhulu olusabhekwe kuMcCarthy njengomqeqeshi osemncane nobonakala ezozuza izinto eziningi ebholeni.
Exoxa neMpempe ngoMsombuluko, uDearnaley uthe isikhathi sikaMcCarthy siyeza kwiBafana Bafana, okwamanje kusamele anqobe izicoco ngaphansi kweDStv Premiership, aphinde azibonakalise ebholeni lase-Afrika.
“UMcCarthy ungumqeqeshi osemncane onekusasa elihle,” kusho uDearnaley. “Kusamele aqine ukhakhayi, awine nezindebe, emva kwolokho ke uyobe esekulungele ukuyothatha umsebenzi weBafana.
“Okokuqala nje iSafa inezinkinga eziningi ezingaqeda ngekusasa likaBenni. Kumele baqale balungise izinkinga zabo.
“Abanalo uhlelo lokuthuthukisa ibhola laseNingizimu Afrika njengoba ubona lifile ibhola lethu kungenxa yobuholi beSafa.
UGeorge Dearnaley esadlala ibhola
“Silande abaqeqeshi abaningi abanonhlonzo bafika bahluleka ukwenza umsebenzi ngenxa yokuthi iSafa ayinalo uhlelo oluqondile lokuthuthukisa ibhola bagcina ukukhuluma ngomlomo bengenzi mnyakazo,” kubhoka le nsizwa eyayingalibheki ipali ngezikhathi zayo.
Ngempelasonto kuvele imibiko ethi iSafa seyiqashe uMcCarthy njengomqeqeshi omusha weBafana, kodwa yakuphika lokho, udaba: https://bit.ly/3aY6afu
Uthe akufanele kuhlalwe kubukelelwe abaqeqeshi bebulawela ikusasa labo yiSafa, ikakhulukazi abakuleli abasebancabe.
“Kumele sibavikele abaqeqeshi, sibakhuthaze ukuthi bangavumi nhlobo ukuthatha umsebenzi weBafana kusenezinkinga ebuholini obukhona,” kugcizelela uMadl’nyoka.
Uphinde wahlaba wahlikiza izimenenja zabadlali wathi azibacabangeli ukuthi bakhule bagcine bengabaqeqeshi.
Uthi zifuna imali kuphela ngoba abadlali basuke bengahlonyiswe ngalutho okuzobasiza kusasa.
“Kumele baqeqeshe nangaphandle kweNingizimu Afrika khona bezozuzela izwe ulwazi lokuthi singabhekana kanjani namazwe omhlaba.
“Njalo thina kuthiwa siyafunda, koze kube nini?”. Uphethe ngokuncoma baphathi baMaZulu nabadlali abenza umsebenzi omuhle kuze kube manje.
Previous Previous post: ‘Igadle enxebeni iSundowns ihlula iBucs’
Next Next post: Uhlatshiswe ikhefu umqeqeshi weCitizens emva kwesibhaxu esinzima